नेपाली महिलाले विश्वकप क्रिकेटमा अवसर पाउलान् ? छनोटमा नेपालसहित ७ राष्ट्र प्रतिस्पर्धामा | mulkhabar.com
February 24, 2019 | 4:02 pm 125 Hits
काठमाडौँ, १२ फागुन-
नेपाली महिलाले क्रिकेटको विश्वकपमा भाग लिने सम्भावना कहिले र कति होला ? यो प्रश्नको जवाफको लागि अब धेरै कुर्नुपर्ने देखिएको छैन । त्यसैको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) महिला विश्वकप क्रिकेटको एशिया छनोट प्रतियागिता अन्तर्गत आज नेपालले हङकङ विरुद्व खेल खेल्दैछ । नेपाली टिमले खेलमा टस हारेर पहिले फिल्डिङको निम्तो पाएको छ ।
बैंककस्थित एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको मैदानमा दुवै टोली जीत निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रेका छन् । टस जितेपछि हङकङले पहिले ब्याटिङ गर्दैछ । त्यस्तै हङकङविरुद्ध नेपाल जीत निकाल्ने र अङ्क तालिकामा तेस्रो स्थानमा उक्लने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रेको छ । जारी प्रतियोगितामा यसअघि तीन खेल खेलेको नेपालले दुई खेलमा जीत तथा एक खेलमा पराजय भोगेको छ । चार अङ्क जोडेको नेपाल अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा छ ।
प्रतियोगतामा नेपालले मलेशियालाई ३४ रनले हराएको थियो भने संयुक्त अरब इमिरेटस (युएई) लाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल थाइल्याण्डसँग भने ५७ रनले पराजित भएको थियो ।
समान तीन खेल खेलको हङ्कङ तीनै खेलमा पराजित हुँदै अङ्कविहीन छ । हङ्कङ अङ्क तालिकाको छ्रैटौँ स्थानमा छ । राउण्ड रोबिनका आधारमा हुने उक्त छनोटको विजेताले आइसिसी महिला टी–२० विश्वकप छनोट–२०१९ प्रतियोगिता खेल्नेछ । एशिया छनोटमा नेपालसहित सात राष्ट्र प्रतिस्पर्धारत छन् । छनोटमा नेपाल, थाइल्याण्ड, युएई, मलेशिया, कुवेत, चीन र हङकङ सहभागी छन् ।